“मरामरा”बाट “रामराम” नहुँदै कुलेलम – Sourya Online
“मरामरा”बाट “रामराम” नहुँदै कुलेलम
सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख ३० गते ३:०९ मा प्रकाशित
नियति हो या परिस्थिति, ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । मलाई सम्झना छ, धेरैधेरै वर्षपहिलेको एउटा गोधूली साँझको । थकितथकित भइसकेको दिन ओथारो बस्न लागेको थियो । पर क्षितिजमा रातको कालिमा छाउँदै थियो । म थिएँ टिन एजर, त्यस्तै १४–१५ वर्षे ठिटो । अचानक मेरो दाहिने हत्केला चिलाउन थालेको थियो । सुनेको थिएँ– लोग्नेमान्छेको दाहिने हात चिलायो भने पैसा पाइन्छ रे † तर, यो के ? हत्केला चिलाएर पैसा पाइनु त कता हो कता, उल्टै हत्केलाको सबैतिर अचम्मका फोका उठेर एक–डेढ महिनाजति खुबै दु:ख पो पाएँ । मुखबाट निस्की त हाल्यो–हे भगवान् †
कुनै अंग्रेजी फिल्म हेर्दै थिएँ, सायद ‘स्टार वार्स, पार्ट फाइभ’ । त्यसको एउटा दृश्यमा सवाल–जवाफ भइरहेको थियो ।
‘के तिमी ईश्वरमा विश्वास गर्छौ ?’
‘म ब्रह्माण्डको रचना हुनुपछाडि लुकेको रहस्य बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु ।’
‘म एक प्राज्ञ हुँ ।’
‘के तिमीलाई धर्ममा आस्था छ ?’
‘आस्था त एउटा अद्वितीय उपहार हो, जुन मैले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । त्यो आस्था र
धर्म सदियौँ पुराना हुन् । विज्ञान आस्था (चर्च)को शक्तिलाई चुनौती दिने सन्दर्भमा अझै आलोकाँचै
छ । तर, संसारलाई दुवै कुरा चाहिन्छ– विज्ञान पनि र धर्म पनि ।’
यो संवादले मलाई राम्ररी नै तान्यो । किनभने, गीता होस् या कुरान, बाइबल होस् या त्रिपिटक, बहाई होस् या जरथ्रुस्ट, गुरुग्रन्थ साहिब होस् या शिन्तो अथवा कन्फ्युसियस– सबै सम्प्रदाय र तिनका घटकमा धार्मिक आस्था एवं विश्वास अनि अनास्था एवं अविश्वास जीवनका अविच्छिन्न पाटा बनेर
म कुनै भन्नलायकको आस्तिक होइन, ईश्वरको पूजा गरेर कहलिने धर्मप्रति म कहिल्यै उस्तो आस्थावान् रहिनँ । तर, बेलाबखत, धेरैजसो त अप्ठेरो पर्दा, असजिलो अवस्थामा फस्नुपर्दा मुखबाट फुत्त निस्कन्छ (अरू पनि धेरैधेरैको मुखबाट निस्केको सुनेको छु) – हे भगवान् † अथवा, हे प्रभु, ओ गड † ओ लर्ड † ओ जिजस † या अल्लाह † या खुदा † वाहे गुरु †
भगवान् अथवा ईश्वर के कुरा हो भन्ने थाहा छैन तर यो शब्द एउटा बानी बनेर अनायासै बेलाबखत मुखबाट निस्कने गर्छ ।
मलाई सम्झना छ, किशोरवयमा प्रवेश नगर्दैको कुरा हुनुपर्छ । किनकिन एउटा लहडले गम्लङ्ग अँगालेको थियो– मलाई ‘ईश्वर’ चाहिएको थियो र म त्यसकै खोजीमा थिएँ † कथा–कुथुङ्ग्रीमा, धार्मिक पुस्तकमा र तिलस्मी गल्पहरूमा पढेको वा सुनेको प्रभाव पनि पर्याप्त मात्रामा थियो (अझ, बढी नै थियो होला) । अनि, एक दिन ‘ल, जे त होला, तपस्या गरेर बस्ने र ईश्वरलाई साक्षत्कार गर्ने’ सोच पलायो ।
तिनताका हामी भारत दार्जिलिङको बेङ्डुबी भन्ने ठाउँमा बस्थ्यौँ । अनि, आफ्नो लहडी सोच पूरा गर्न म दुईजना दाइसँगै हिडेँ एक दिन जंगल किनारमा तपस्या गर्न ।
जंगल हाम्रो बस्तीभन्दा धेरै टाढा थिएन । त्यहाँ खोज्दै जाँदा एकदमै नजिक रहेका दुईवटा रूख भेटिए । ती रूखको नाम अहिले मलाई याद छैन । रूखमै चढ्ने र अलि सजिला हाँगाहरूमा बस्न मिल्ने अनि घामपानीबाट पनि यथासम्भव रक्षा हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गरियो ।
विद्यालयमा बिदाको समय थियो । बिहान सकेसम्म चाँडै खाना खाइवरी निस्कन्थ्याँ र रूखमा बनाइएको त्यही तपस्यास्थलमा बस्न पुग्थ्याँ अनि रात छिप्पिन थालेपछि घर फर्किन्थ्याँ ।
रत्नाकर डाकु घटना परिस्थितिले गर्दा ‘मरा मरा’ मन्त्र जप्दै अन्तत: रामायणका रचयिता महर्षि वाल्मीकि बन्न पुगेको कुरा हामीले पढेसुनेका थियौँ । अनि, त हामी पनि ‘मरा मरा’ भन्दै ‘राम राम’सम्म आइपुग्थ्याँ र त्यही दोहोर्‍याइरहन्थ्याँ । तिनताका आनीछोइङ र न्हू वज्राचार्यको चर्चित कम्बिनेसनको ‘… चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस्, मेरो पाइतालाले किरै नमरोस्…।’ भन्ने कहीं छेकछन्दै थिएन । तर, ईश्वरअनुरागी हाम्रो बालमनमा ब्रह्माण्डीय अहिंसा र उपल्लो दर्जाको परोपकारी भावना पलाएको हुन्थ्यो । हामी त्यो पवित्र तपस्यास्थल जाँदाआउँदा बाटामा कतै कमिला नै पनि कुल्चिन्छ कि भनेर विशेष सतर्क भएर हिँडेका हुन्थ्यौँ । सायद बुद्ध बन्ने अभ्यास सुरु भएको थियो ।
बिहान–साँझ घरमा खान खाँदै बस्ने र दिउँसोदेखि अबेला रातिसम्म तपस्या गर्ने क्रम प्राय: दुई साता जति जारी रह्यो । बीचमा कहिलेकाहीं पानी पर्‍यो तर त्यो सिमसिमे मात्र हुन्थ्यो– ठूलो र भिजाउने खालले आएको हुँदैनथ्यो । त्यस्तोमा सानासाना हाँगा र धेरै पात मिसाएर मचानजस्तो रूप दिई हामीले सानोतिनो पानीले नभिज्ने व्यवस्थासम्म मिलाएका थियौं ।
हाम्रो बालतपस्या निर्बिघ्न जारी थियो ।
तर, अचानक एकदिन ठूलो पानी पर्‍यो र लामै समयसम्म बिदो हुन मानेन । हामीलाई पर्‍यो
फसाद † हामी पानीमा नराम्ररी चुटियौंँ । साँझ अँधेरिइसकेको थियो । अब जाडो हुन थाल्यो । पानी मचानको ओतमुनि हाम्रो तपस्यास्थलमा एकनासले चुहिरहेको थियो । यस्तै हालतमा त्यहाँ बसिरहन सम्भव भएन । पानीले चुर्लुम्मै भएर रूख पनि चिप्लो भइसकेको थियो । तैपनि, एक बल्ड्याङसम्म पनि नखाई हामी तल ओर्लन सफल भयौँ । भुइँमा उभिन आइपुग्दा त कुनै युद्ध नै जितेजस्तो पो अनुभूति भयो † लुगलुग काम्दै बल्लतल्ल घर आइपुग्याँैं । सायद घरमा एक थुन्से गाली र एक रोँचे भकुराइ पनि पाइयो । भोलिपल्ट मात्र होइन, ज्वरो आएर तीन दिनसम्म ओछ्यान समात्नुपर्‍यो ।
निको भएपछि घरमा सबैलाई छलेर हतारहतार उही पवित्र तपस्यास्थल पुगें । तर, त्यहाँ धेरैजसो पातसमेत झरिसकेका रूखबाहेक केही थिएन । हाम्रो प्रिय तपस्यास्थल पनि हुरीबतास र वर्षाले उडाएछ, नेस्तनाबुद पारिदिएछ । सफलताको नजिक पुगेर फर्किन परेकोजस्तो अपार निराशाको भावमा तरंगिँदै लुरुलुरु घर फर्किएको थिएँ । अनि, त्यसपछि त त्यो भीषण तपस्या ‘मरा मरा’ बाट ‘राम राम’ नहुँदै कुलेलम हुन पो पुगिएछ ।
सोचेका थियाँ, हामी वाल्मीकि बन्दैछाँ– धमिराले शरीरमा घर नबनाउँदासम्म हामी अहोरात तपस्यामा लीन रहनेछाँ । यति हदसम्म भएपछि कसो एकदिन प्रभुको दर्शन नपाइएला † हामी अज्ञात सुदूर भविष्यमा मनको लड्डु घिउसित खान्थ्याँ र त्यो सुन्दर दिन सम्झेर फुलेल हुन्थ्यौँ जुन दिन हामी पनि तपस्याको फल प्राप्त भइसकेका ‘ज्ञानी आत्मा’ भइसकेका हुन्थ्यौँ । तर, भर्सेला परोस्, त्यस दिनको आँधी, हुरी र मुसलधारे पानीलाई जसले हाम्रा सारा रुमानी कल्पना र सोम शर्मामय सपनाहरूलाई पहिले भिजायो अनि बगाएर लगिदियो ।
बालापन त हो, एउटा न एउटा धुन सवार हुन्छ । त्यो पूरा होस् या नहोस्, अर्को फेरि जन्मिहाल्छ ।
तिनताका सन्तोषीमाताको महिमा उभारमा थियो । ‘जय सन्तोषी माँ’ फिलिम पनि बनेको थियो । धर्मभीरु जनमानसमा हरेक शुक्रबार सन्तोषीमाताको व्रत बस्ने चलन चल्न थालेको थियो । आफूलाई भोक लागेर केही खाने कुरा गर्‍यो, ‘आज त सन्तोषीमाताको व्रत हो, खान हुँदैन’ भनेर मुखै थुनिदिने † लौ, जसो हो भनेर एकदिन म पनि व्रत बस्न अघि सरें ।
दस–बाह्र वर्षको थिएँ हुँला । बिहानै उठेर नुहाएँ, धुप आदि बालेर सन्तोषीमाताको ‘मैँ तो आरती उतारूँ रे …, सन्तोषीमाता जय जय माँ…’ भन्ने आरती पनि भाका हालिहाली गाएँ । चियासमेत केही खाइनँ । बिहान र दिउँसो त सामान्य भएर बिते तर तीन बज्न थालेपछि त मलाई भाउन्नै छुट्न थाल्यो । कस्तोविधि भोक लाग्यो भने म केही बोल्न र केही गर्न नै सक्दिनँ कि जस्तो हुन थाल्यो । एकछिन ढुलमुल मनस्थिति लिएर भए पनि बसिरहँ । पछि एउटा हिन्दी गीत सुनेँ जसको सार थियो– भोको पेटले भजन गाउन सकिंदैन ।
त्यसै दिनदेखि हो, आफू मरेर कुनै चिनजान नै नभएका देवीदेउता खुसी पार्न खोज्ने व्रतबाट मेरो विश्वास सधैंका लागि हट्यो ।
त्यसैताका, बिहान नुहाइवरी धुप बाल्ने, त्यसकै टीका लगाउने र ‘ओम जय जगदीश…’ भन्दै आरती गाउने धुन चढेको थियो । यो प्रक्रिया अलि धेरै समय चल्यो र जाडो बढेपछि हरायो । यदाकदा ‘हनुमान चालिसा’ को पाठ पनि गरिन्थ्यो । तर, ती यावत् कुरा गरेर मैले के पाएँ र के पाइनँ, मलाई कहिल्यै
थाहा भएन ।
आज यी र यस्ता सबै कुरा सम्झना मात्र बनेका छन् । बाल्यावस्था र किशोरावस्था मदेखि टाढिइसकेका छन् । परिवेश, अध्ययन र अनुभवले मलाई भौतिकवादसित नजिक्याएका छन् । यो भौतिकवादमा धर्म र देवता दुवै छैनन्, तेत्तीसकोटि देवताको युटोपियालाई कुनै ठाउँ छैन । यहाँ जीवनका जटिलता छन्, बाँच्नका लागि सक्षम र अक्षमबीचको अनवरत संघर्ष छ, भौतिक सम्पन्नता प्राप्त गर्ने दौड छ, व्यक्तित्व विकासको नीरस प्रतिस्पर्धा छ, मानव र प्रकृतिबीच कठोर द्वन्द्व जारी छ ।
तर, पनि म विश्वास गरूँ वा नगरूँ, घरिघरी मनमा ‘गड ब्लेस मी’ भन्ने भावना अझै उठिरहने गर्छ । ईश्वरीय चाहनाको यो भावना के हो– धर्मविरोधी कट्टरताको अभावको अभिव्यक्ति हो या धर्मको नाममा मलाई प्राप्त परिवेशजन्य सामाजिक लिगेसी ?
आफू समस्यामा पर्दा जसको पुकारा गरिन्छ, सायद उनै हुन् भगवान् । आफूलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्ने मानिस जोसुकै भए पनि भगवान्सरह हुन्छ । आकांक्षाहरू पूरा गर्न र लक्ष्यहरू हासिल गर्न हामीलाई केही आधार चाहिन्छ, त्यो आधार जसलाई दुनियाँ आत्मविश्वास भनी पुकार्छ (चाहे त्यो अमूर्त नै किन नहोस्) ।
आत्मविश्वासको नाम नै भगवान् हो भने सायद त्यो भगवान् मसित छ । त्यो खोज्न म अन्यत्र भौँतारिइरहनु पर्दैन ।